News - Super Abrasives Market Iji Rute Ijeri USD 11.48 Site na 2027
Bawanye n'ọchịchọ maka nkenke na ịkpụzi akụrụngwa n'ihi nrụpụta na-arị elu nke ụgbọ ala na ọrụ ihe owuwu na-eme ka mkpa maka ahịa Super Abrasives.
New York, June 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - A na-atụle Market Super Abrasives zuru ụwa ọnụ iru USD 11.48 site na 2027, dị ka akụkọ ọhụrụ sitere na Akụkọ na Data. Ahịa ahụ na-ahụ okewanye mmasị maka nkenke na ịkpụzi ngwaọrụ maka mmepụta nke ugbo ala na ọrụ ihe owuwu. Na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ, a na-eji ngwaahịa ahụ emepụta nchapu, ịcha osisi, na ịcha ngwaọrụ iji igwe ihe, brik, na nkume. Otú ọ dị, mgbagwoju anya na-arịwanye elu nke teknụzụ abrasive dị elu na ngwa ngwa na nnukwu ụgwọ mbụ na-eme ka o siere ndị obere na ndị na-ajụ ụlọ ọrụ ike ịlụ ọgụ na ndị isi ahịa ụwa ma yabụ, ga-egbochi ọchịchọ nke ahịa ahụ.
Ọsọ mmepe obodo ukwu agbanweela ụzọ ndụ ndị mmadụ n'otu n'otu wee, si otu a gbasaa mgbasa nke ngalaba ihe owuwu ahụ maka ebumnuche azụmahịa karịa akụkụ sara mbara; ya mere, na eme ka icho ahia ahia. N'ihi hụ na ezigbo ire nke akụkụ, ngwaahịa na-eji dị ka a-egweri ngwá ọrụ na n'ichepụta nke ụgbọala akụkụ dị ka n'iru usoro, gia aro, ọgwụ usoro, na cam / crankshaft. Motorbawanye moto na eletriki ụgbọ ala na-atụ anya ịkwalite ahịa ahịa maka ngwaahịa ahụ na afọ ndị na-abịanụ. A na-atụ anya ka akụkụ diamond ahụ na-eto nke ọma, n'ihi mmụba na-arịwanye elu maka ngwa ọrụ nkenke sitere na ụlọ ọrụ ụgbọ ala na nke aerospace.
Nghọta na-arịwanye elu nke teknụzụ dị elu na uru nke abrasives dị elu enyela aka na ntụgharị uche ka ukwuu na ihe ndị dị elu. Ha na-eji ọtụtụ ebe na brek mmepụta na rụpụta, nkwusioru owuwu, taya, Motors, wiil, na roba, na ndị ọzọ. Industrylọ ọrụ ngwaahịa ụgbọ ala na OEM akpaaka (ndị nrụpụta akụrụngwa mbụ) nwere ọtụtụ ahịa maka ngwaahịa ndị na-abaghị uru. Ulo oru siri ike nke ulo oru ugbo agha nwere ike ime ka mgbasawanye nke ihe uwa nile choro maka abrasives di uku.
Ọzọkwa, ụdịdị dị iche iche dị elu na-ebuwanye ibu, yana ihe omume R&D na-eto eto na-atụ anya iji mee ka uto nke ụlọ ọrụ abrasive zuru ụwa ọnụ dị ngwa. N'ebe dị ala, nnukwu ụgwọ dị na ya nwere ike igbochi uto nke ahịa zuru ụwa ọnụ nke nnukwu abrasives. Tụnyere ọdịnala abrasives, ndị ahịa nke ibu abrasive egweri wiil dị nnọọ elu. Enweghi ike inwe nsogbu ahia, enweghi oke nkpa banyere nkpa ahia, na otutu ndi ozo. N'ihi ya, ọnụahịa nke ihe eji eme ihe maka imepụta nnukwu abrasives nọ n'okpuru mgbanwe dị iche iche, nke nwere ike igbochi uto nke ihe karịrị oge amụma.
Ihe mmetụta COVID-19: Ka ọgba aghara COVID-19 na-eto, ndị na-emepụta ngwa ngwa na-agbanwe omume ha na ịzụta ihe ndị dị mkpa iji gboo mkpa nke ọrịa oria, nke belata mkpa maka nnukwu abrasives n'ahịa. N'ime ọnwa ole na ole, a ga-enwe usoro nke nsogbu dị mma na nke na-adịghị mma, ebe ndị nrụpụta na ndị na-eweta ha na-azaghachi ndị na-eweta ọrụ na-agbanwe agbanwe. Site na ọnọdụ zuru ụwa ọnụ, akụ na ụba na-adabere na mbupụ nke ọtụtụ mpaghara dị ka enweghị ngwangwa. A na-agbanwe Market Super Abrasives Global site na nsogbu nke ọrịa a, dịka ụfọdụ ndị na-eweta ngwaahịa na-emechi ma ọ bụ belata mbubata ha, n'ihi na enweghị mkpa sitere na ahịa dị ala. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị gọọmentị ha kwụsịtụrụ mmepụta ha dị ka ụzọ iji gbochie mgbasa nke nje a. N'ógbè ụfọdụ, ahịa na-elekwasị anya n'ịghọkwu mpaghara, site na ileba anya na ntiwapụ nke ntiwapụ ahụ, na ihe ndị si na ndị ọchịchị obodo n'otu n'otu rụpụtara. N'okpuru ọnọdụ ndị a, ọnọdụ ahịa na mpaghara Eshia Pacific dị ezigbo mmiri, na-agbadata kwa izu, na-eme ka ọ sie ike ịkwado onwe ya.
Nchọpụta ndị ọzọ sitere na akụkọ ahụ na-egosi
Dabere na ngwaahịa, Diamond gụrụ maka ndị kasị ibu òkè nke ahịa na 2019, esighịkwa n'ihi Njirimara ndị dị ka mgbochi adhesion, chemical inertness, ala esemokwu ọnụọgụ, na mma na-eyi ndị na-eguzogide.
Industrylọ ọrụ Elektrọnik bụ akụkụ kasịnụ n'ahịa ahụ, na-ejide ihe dị ka 46.0% nke azụmaahịa niile na 2019, ebe ọ na-ewepụta akụkụ ndị pere mpe ma dị mgbagwoju anya na nnagide dị nso nke kwekọrọ n'ụzọ ziri ezi na akụrụngwa igwe, si otú ahụ mee ka ọ dabara maka ngwa dị iche iche na-abụkarị PCBs .
Asia Pacific chịkwara ahịa na 2019. Na-elekwasị anya na usoro ndị na-eri ego na nke ọhụụ na-agbanwe agbanwe na mpaghara ahụ na-eme ka ahịa ahụ. Mpaghara Asia Pacific nwere ihe dịka 61.0% nke Market Super Abrasives, na North America, nke nwere gburugburu 18.0% ahịa n'afọ 2019.
Ndị dị mkpa gụnyere Radiac Abrasives Inc., Noritake Co. Ltd., Protech Diamond Tools Inc., Asahi Diamond Industrial Co. Ltd., 3M, American Superabrasives Corp., Saint-Gobain Abrasives Inc., Carborundum Universal Ltd., Eagle Superabrasives, na Action Superabrasive, n'etiti ndị ọzọ.
Maka ebumnuche akụkọ a, Akuko na Data abanyela n'ime Super Abrasives Market zuru ụwa ọnụ dabere na ngwaahịa, onye ọrụ njedebe, ngwa, na mpaghara
Outlook Product (Volume, Kilo Tons; 2017-2027) (Ego ha nwetara, Billion USD; 2017-2027)
Cubic Boron Nitride / Diamond / Ndị ọzọ
Out-User Outlook (Mpịakọta, Kilo Tọn; 2017-2027) (Ego ha nwetara, Billion USD; 2017-2027)
Aerospace / Akpaaka / Ahụike / Elektrọnik / Mmanụ & Gas / Ndị ọzọ
Nlele Ngwa (Mpịakọta, Tlọ Kilo; 2017-2027) (Ego ha nwetara, Billion USD; 2017-2027)
Powertrain / Iburu / Gear / Ngwakọta Ngwakọta / Turbine / Ndị ọzọ
Outlook Regional (Mpịakọta, Tlọ Kilo; 2017-2027) (Ego, Ijeri USD; 2017-2027)
North America / US / Europe UK / France / Asia Pacific China / India / Japan / MEA / Latin America / Brazil